အမှတ်ရမိပါတယ် ဗိုလ်ချူပ်ရေ (General Aung San) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အမှတ်ရမိပါတယ် ဗိုလ်ချူပ်ရေ (General Aung San)
အမှတ်ရမိပါတယ် ဗိုလ်ချူပ်ရေ (General Aung San)
Posted by mnoe on Feb 13, 2011 in Other - Non Channelized |9comments
aung san Poem shwepyithu
တို့ဗိုလ်ချူပ်(ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း) ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဗိုလ်ချုပ်ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုရင်း ……….
G Aung San's poem
ပထမဆုံးတင်တဲ့ ပို့စ်လေးမို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။
ရွာသားတွေအားလုံး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ။
ကဗျာတွေမှာ.. ၀ှက်ထားတတ်တာလေးတွေရှိတတ်တယ်..။ အဲဒါလေးတွေဖေါ်ရေးနေရင်ကို ..စာတွေဖြစ်လာတာပါပဲ..။
အဲဒါကို ကျုပ်လည်း ..ဒီမှာပဲတင်ဖူးပါတယ်..။
တကယ်တော့ .. အဲဒီကဗျာ..ဘာသာပြန်ကဗျာကလေးပါ..။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြန်တာလို့ ပြောနေကြတာပါပဲ..။
အောက်မှာ..အငြင်းပွားဖွယ်တချို့ ဖြစ်နေတာကို ..ရှင်းထားတာ.. ရွှေအမြုတေမှာပါခဲ့တာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒီစာတွေကို .. http://www.shweamyutay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2698:2010-11-01-06-23-21&catid=90:2008-06-08-19-55-01&Itemid=682 ကရပါတယ်..။
ဗြိတိသျှ အစိုးရသည် ၁၉၂၀ ပြည့် နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေကို ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် သက်ရောက် စေခဲ့ရာ၌ ၁၉၀၆ ခု နှစ်မှစတင်၍ သန္ဓေတည် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝ အသင်းများ (Young Men’s Buddhist Associations)ခေါ် ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းများနှင့် အလားတူ အသင်းများ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာပြည်သူတို့က ဗြိတိသျှ အစိုးရအား နိုင်ငံရေးအရ ဆန့်ကျင် နေချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းကြီးသည် နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ရာ၌ ထိရောက်တွင်ကျယ် ရေးအတွက် ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းများနှင့် အလားတူ အသင်းများ၏ အင်အား တောင့်တင်းမှုနှင့် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ရှေးရှု၍ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အသင်းချုပ်ကြီး (General Council of Burmese Associations) ခေါ် ဂျီစီဘီအေ အသင်းကြီး အဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထိုအတောအတွင်း အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်၊ နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်နှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ထက်သန်သော ကျောင်းသားများက အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေကြရန် စိုင်းပြင်း နေကြသည်။ ထိုစဉ်က တက္ကသိုလ်အာ ဏာပိုင်များ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် နှစ်စဉ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေပေးသည့် နည်းတူ ကျောင်းသားများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ မဂ္ဂဇင်းကို အမည်ပြင်ဆင်ထားသည့် အိုးဝေ သို့မဟုတ် ဥဒေါင်း၏အသံ မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေလျက် ရှိကြသည်။ အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း၏ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာမှာ ဘီအေအောက်တန်း ကျောင်းသားကို အောင်ဆန်းနှင့် မဂ္ဂဇင်း အတွင်းရေးမှူး မှာ အိုင်အေ အထက်တန်း ကျောင်းသား ကိုသိန်းတင်(ညိုမြ)တို့ ဖြစ်သည်။ ညိုမြသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ စတင် တက်သည့် ၁၉၃၃ ခုနှစ်ကပင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ ဂန္ထလောကနှင့် အိုးဝေ မဂ္ဂ ဇင်းတို့တွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ စာတမ်းနှင့် ကဗျာများကို ရေးသားခဲ့ပြီး အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၃၈ ခုနှစ် အထိ အယ်ဒီတာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
In the fel lclutch of
My head is bloody but
Boyond this place of wrath and
Finds, and shall find, me
It matters not how strait the
ဗြိတိသျှ အစိုးရသည် ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေကြသည့် တို့ဗမာ အစည်းအရုံးဝင်များနှင့် ပြည်သူတို့အား မျက် ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်မှု၊ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်မှု၊ တရားစွဲဆို၍ ထောင်ဒဏ်နှင့် ပြစ်ဒဏ် အမျိုးမျိုး ချမှတ်မှုတို့ဖြင့် ဖိနှိပ်လျက် ရှိသည်။ ဗြိတိသျှ အစိုးရက ဖိနှိပ်မှု အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုကျင့်နေသည့် ကြားမှပင် မြန်မာမျိုးချစ်တို့သည် အညံ့မခံဘဲ ရဲဝံ့စွာ ဆန့်ကျင်နေကြစဉ် အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာWilliam Ernest Henley (1849-1903) (၁၈၄၉-၁၉၀၃) ရေးဖွဲ့သည့် INVICTUS ကဗျာသည် မြန်မာစာပေ ၀ါသနာရှင် လူငယ်များ အကြား ပျံ့နှံ့လျက် ရှိသည်။ ထို ၀ီလျှံအမ်းနက် ဟင်းနလေး ရေးဖွဲ့သည့် “အင်ဗစ်တပ်စ်” ကဗျာသည် ဗြိတိသျှ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်နေကြသဖြင့် ဖိနှိပ်မှု အမျိုးမျိုးဖြင့် ရင်ဆိုင် နေကြရသည့် မြန်မာမျိုးချစ်တို့ ၏ ဇွဲသတ္တိကို အားပေး လှုံ့ဆော်ပေးနေ သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် မြန်မာမျိုးချစ် များကို အားပေး ထောက်ခံ၍ ပြည်သူတို့ ကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်၍ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း(၁၉၃၆ အတွဲ-၆ အမှတ် ၁)တွင် အင်ဗစ်တပ်စ် ကဗျာကို အနိုင်မခံ အမည်ဖြင့် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန် ဆိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အနိုင်မခံ မြန်မာဘာသာပြန် ကဗျာကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် နှစ်ငါးဆယ်စာစောင် (၁၉၂၀-၁၉၇၀)တွင် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း (၁၉၃၆ အတွဲ-၆၊ အမှတ် ၁)မှတစ်ဆင့် ရည်ညွှန်း ဖော်ပြထားရာတွင် ဘာသာပြန်ဆိုသူ အမည် မပါဝင်ဘဲ ခေါင်းကြီးပိုင်း အဖြစ်သာ ဖော်ပြထား ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်ကဗျာ ဆရာ ၀ီလျှံအမ်းနက်ဟင်းနလေး ရေးဖွဲ့သည့် အင်ဗစ်တပ်စ် ကဗျာကို အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်းတွင် မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုဖော်ပြစဉ်က ဘာသာပြန်ဆို သူ၏ ကလောင် အမည် မပါဝင်ခဲ့သဖြင့် စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုသူ မည်သူဖြစ် သည်ကို ပဟေဠိသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ကြပါ လိမ့်မည်။ အနိုင်မခံ မြန်မာဘာသာပြန် ကဗျာ ဖော်ပြသည့် အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း၏ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ အဖြစ် ကိုအောင်ဆန်းနှင့် အယ်ဒီတာ(မဂ္ဂဇင်းအတွင်း ရေးမှူး)အဖြစ် ကိုသိန်းတင်(ညိုမြ)တို့ ကိုသာ သိရှိခဲ့ကြပါသည်။
(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ငါးဆယ် (၁၉၂၀-၁၉၇၀)စာစောင်၊ ဘာသာ ပြန်စာပေစာတမ်းများ(စာပေဗိမာန်)၊ ရာ ပြည့်ဦးစိုးညွှန့်၏ ၂၀ရာစု မြန်မာစာရေး ဆရာ ၁၀၀၊ ညိုမြ၏ ကျွန်တော် ငရဲခွေး ဆောင်းပါးရေးစဉ်က ဆောင်းပါး (အိုးဝေရွှေရတု သဘင် လက်ရွေးစင် စာအုပ်)၊ ချင်းတွင်းချစ်သွေး၏ ဦးညိုမြ နှင့်ခြေလှမ်း ၂၀၀ ဆောင်းပါး၊ (စာမော် ကွန်း ၁၉၈၆ ဧပြီ)၊ မြကေတု၏ သခင် အောင်ဆန်းနှင့် သူ့ကဗျာသူ့နိမိတ် ဆောင်းပါး Popular News Journal 20.05.2010 တို့ကို ညှိနှိုင်းကိုးကား သည်။)
(ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း၊နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ဘာပဲပြောပြော ပြည်သူတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေသုံးတဲ့ ဒို့ဗိုလ်ချုပ်၊ အောင်ဆန်း၊ ဖခင် ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကိုပဲ ကြိုက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပြတ်သားတဲ့စိတ်သဘောထား အဆောင်ယောင်မပါတဲ့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲအသံလို့ ခံစားမိတယ်။
ယခုလို ယခုခေတ် အဘ အဘ နဲ့ ဖားခေါ်သံကို နားထဲကြားယောင်မိပြီး ဒီအသုံးအနှုန်း ရေးထားတာကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူး….
ဖခင်လို့ သုံးတဲ့အားကိုးမှုနဲ့အသံကို ကြားယောင်နေတုန်း
အဘ ဆိုတဲ့ အသံကို အော်ဂလီဆန်တယ်
shwe pyithu က မလေးမစား ဖားခေါ်တာလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော် ခေါင်းစဉ်မြင်မိပြီး စိတ်ထဲကလာတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောမိတာပါ အမှားပါရင်တော့ ခွင့်လွှတ်
ကျေးဇူးပါ htoopa ရေ။ တကယ်တော့ ကျမလဲတော်တော်စဉ်းစားပြီးမှ ရေးခဲ့တာပါ။ ဗိုလ်ချူပ်လို့ဆိုရင် ကိုယ်မလေးစားတဲ့ ဟို ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ရောနေမလားလို့။ ကဲ ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ၀မ်းသာတယ် အဲလိုအပြောခံရတာ။ အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိလို့ပါ။
အချက်အလက်တွေ တစ်စုတစ်စည်းတည်း တင်ပေးတာ
အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျမလဲ တခြားမှာ မြင်ဖူးတယ်လို့ သံသယရှိမိပါတယ်။ အခုလို ပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတော့ ပို့စ်လေးတင်ရကျိူးနပ်သွားပြီ။ နောက်လဲ မှားတာတွေ့ရင် ထောက်ပြလို့ရပါတယ်။ ကိုခိုင်တင်ထားတာ မဖတ်မိလို့ ထပ်တင်သွားမိတာတော့ ဆောရီးပါနော်။ အချိန်ပေးရေးသားပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ
တစ်ထောင့်ကိုးရာတစ်ဆယ့်ငါး ရှေ့နေ ဦးဖာသား
ဇာတိနတ်မောက်၊ မကွေးခရိုင်၊ သိကြများ ခုတိုင်
ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဇာနည်ဘွား၊ မိခင် ဒေါ်စုသား
တစ်ထောင်ကိုးရာလေးဆယ့်ခွန်၊ ပြောင်းကြွ တမလွန်
မျက်ရည်သွန်လို့ ဘဝင်ညှိုး၊ ဇူလိုင် နှစ်ဆယ့်ကိုး
ငါတို့ မမေ့အား ။
** ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကဗျာလေး၊ ခုတော့ နိုင်ငံရေး။